Video 9 - Nnọgharị Mmekọahụ | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Vidio 9 - assghachite Mmekọahụ
Dysphoria okike, Mmekọahụ Mmegharị Mmekọahụ / Site mere
9 vidiyo: Dysphoria nke Nwata.
Usoro nke Ntughari Mmekọahụ
Nke a bụ ogologo okwu ma ọ dị anyị mkpa ịkwụsị ihe mere ịwa ahụ ahụ. Anyị ekwuola na ụmụ nwanyị ise nọ n'Australia, opekata mpe, ewepụla ara ha, mastectomy ọzọ. Anyị amataghị mmadụ ole ịwa ahụ iji mepụta ụdị ọdịdị nke akụkụ ahụ na-abụghị nke nwoke na nwanyị.
N'ime ụmụ nwoke ọ bụghị ihe niile agaghị ekwe omume. Naanị ihe ị ga - eme bụ igbutu amụ, chebe njedebe nke amụ, jiri ureter kwụọ ụgwọ ka ị wee nwee ike ịchịkwa mmamịrị site n'isi isi penile a, nke ị na - etinye ugbu a n'akụkụ dị elu. nke oghere wuruwuru nke ị na-eme n’etiti ụkwụ gị. Ma ozugbo ị meghere oghere ahụ, ị ​​ga - agbanwe eriri ahụ ma yabụ mepụta ikpu, ị megharịrị ihe ndị na - agba ume ma nwee olile anya na a ga - achịkwa mamịrị ahụ Ma mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị ga-enwe agụụ mmekọahụ na-anabata, oke nke akpịrị ahụ nwere ike ọ gaghị ezu, na, maka ọdịmma, ị nwere ike mkpa imikpu oghere ahụ site na isonye otu eriri afọ. Nke a na-eke ikpu keakamere. Onlykwesịrị naanị ịmasị ịwa ahụ iji chee nsogbu nke ihe a niile, mgbe naanị dịka ọmụmaatụ, akpụkpọ ahụ dị n'èzí pụtara ka ọ pụọ n'èzí ihu igwe, yabụ ikwu okwu. Mgbe ị na-etinye ya n'ime na ooh mgbe niile, nke ọma, nke ahụ abụghị akwa cellular ziri ezi. Ya mere, e nwere na-agbasa ala, na-efe efe na otú pụta.
Nke ahụ na-ada ike zuru oke ma na-esiri anyị ike. Ma iji kee nwoke site na nwanyị siri ike. Enwere ihe nkedo tinyere na ihe abụọ a, ma ị na-ewepụ akpanwa na ovaries, ị na-emechi ikpu, ma ugbu a, ihe ị ga-eme na amụ? Nwere ike ịmepụta amụ site na ịkpụgharị aka na ogwe aka, ha mụtara usoro ndị a na Agha Worldwa nke Abụọ na ndị mmadụ merụrụ ahụ nke ukwuu, ị nwere ike ịme aka tubular ma gbadaa ya n'etiti ụkwụ. Nsogbu bụ na ịchọrọ ịmịrị mamịrị site na njedebe ya, yabụ na ị ga-emepụta tuba, nke bụ nsogbu doro anya n'onwe ya, ma ugbu a, ị ga-enwerịrị ebe a na-agba ume ma sonyere ya. ị na-atụ anya ụdị ụfọdụ nke inwe mmekọahụ site na ya. Ka ọ dị ugbu a, ihe ahụ na-agbatị kpamkpam n'etiti ụkwụ, nke abụghị ụzọ maka inwe mmekọahụ, ya mere ọ ga-esi ike. Ugbu a, n’ime otu ihe nịịle m chere n’echiche, dịka e si n’eriri Adam wee mee Iv, ọgịrịga ha, ha nwere ike iji ọkpụkpụ sitere n’aka Eve mee ka ngwa ahụ sikwuo ike, nke na-anwa ugbu a ime ya nwoke.
Amaghị m ma m kọwara ya nke ọma. Mana ikwesiri ike ka nke a sie ike, yabụ ị ga-etinye ọkpụkpụ n'ime ya na ọkpụkpụ anaghị enwe mmasị itinye ya ebe ahụ. Ọ nwere ike ịbanye n'ime ya, ọ nwere ike itinye obi gị dum na ihe ndị ọzọ. Ya mere, ana m ebuwanye nke a, na-ele ya anya, n'ihi na mgbe ndị mmadụ na-ekwu ịwa ahụ na-enwe mmekọahụ, m wee hụ otu akụkọ ụbọchị gara aga na ihe dịka iri, iri abụọ, iri atọ nke ụmụaka ndị a nwere mgbochi homonụ egbochi na homonụ nwoke na nwanyị , na-achọ ịwa ahụ mgbanwe nwoke na nwanyị. Ọfọn, ọ na-apụ ire gị dị ka a ga - asị na nke a dị ka ịpụ apụ, ma ọ bụ ma eleghị anya tonsils ma ọ bụ ihe ọ bụla. Nke a bụ nnukwu nnwale ịwa ahụ. Dị ka ọmarịcha nnwale nke nsogbu pụta ụwa nke pụtara oke, doro anya. Yabụ, nke a, nke ọma, ihe metụtara ọgwụgwọ a yana n'ezie, ihe nwere ike ịgahie. Ikwesiri ịnọ n’okpuru nlekọta ahụike n’oge ndụ gị niile.
Ajụjụ bụ, onye na-akwụ ụgwọ? Ọ dị, enwere arụmụka siri ike sitere na ụlọọgwụ dysphoria nke nwoke na nwanyị na ndị ụtụ isi kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka nke a maka ndụ. Nke ịwa ahụ na ihe ndị ọzọ kwesịrị ime na Australia n'okpuru usoro nlekọta ahụike. Ọgwụ ndị ahụ dị oke ọnụ, nsogbu ndị ahụ dị oke ọnụ, ịwa ahụ dị oke ọnụ. E nwere oge ndụ azụmaahịa, ọ nweghị ihe ị ga-eme ebe a, ndị otu ụlọ ọgwụ na ndị ọzọ. Enweghị mkpali dị ọcha. Ekwenyesiri m ike na ha na-achọ ime ka ndụ ụmụaka ka mma, mana enwerekwa ego ndị ọzọ dị mkpa ka a chọpụta.
Ihe m ghotara site na America, n’izu gara aga, bụ na gọọmentị California ekpebiela na ọ ga-abanye usoro ọgwụgwọ a niile dị egwu, ga-ebi na ndụ. Kedu nke gosipụtara gị ike nke ndị mmadụ na-akpali nke a. N'ihi na m nwere nwa nwanyị bi na United States na ọ gwara m na otu n'ime ụmụaka ahụ dabara ụbọchị nke ọzọ na ọ ga-enwerịrị ntụgharị ise. Ihe nrịba ahụ ruru dọla otu puku na narị ise. N'azụ ya nye nwa a, ọ dị dọla iri abụọ, puku iri atọ, puku dọla iri anọ. Etufuola m ego ole ọ bụ. Ọ dị mma, nke a na - egosi gị mmesapụ aka nke steeti California, ma ọ bụ ikekwe ndị mmadụ na - akwado ihe a, n'ihi na ọ dị ka onye na - atụ ụtụ isi nke California ga - eburu ụgwọ maka nke a, n'ihi echiche ahụ. nke nwoke na nwanyị.
Vidio 9 - Ntughari Mmekọahụ - Pịa> Iji budata PDF ebe a.